Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato gaariga korontada ku shaqeeya | Cusbooneysiinta Cagaaran
Gawaarida korontada: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Jarmal Portillo | | Gawaarida korontada
Shidaalka foosha ayaa hadda ah taariikh. Kala-guurka tamarta wuxuu u baahan yahay in mustaqbalkeenna loo jiheeyo adduun meesha dib loo cusbooneysiin karo. Sidaa darteed, gawaarida waa inay ahaadaan kuwo si buuxda usii waara oo aan wasakheyn. Gaariga korontada ku shaqeeya waa gaari ay ku shaqeyso hal ama in ka badan oo matoorro ah oo isticmaala korontada ku keydsan baytariyada dib loo soo celin karo isla markaana u beddelaya tamar firfircoon. Waxaa jira matooro tiro badan iyo noocyada gawaarida korontada ku shaqeeya.
Haddii aad rabto inaad ogaato wax kasta oo la xiriira gawaarida korantada, tani waa boostadaada. Waxaad wax ka baran doontaa sida baabuurka korontada u shaqeeyo iyo faa'iidooyinka uu leeyahay.
1 Taariikhda gaariga korontada ku shaqeeya
2 Astaamaha Gawaarida Korantada
3 Qaybaha baabuurka korontada ku shaqeeya
5 Dib udhacyada
Taariikhda gaariga korontada ku shaqeeya
Ma ogtahay in gaadhigii ugu horeeyey ee la ikhtiraacay uu ahaa koronto. Soo-saaristeeda ayaa dib u soo noqotay ilaa sanadihii 1832-1839 markii Robert Anderson loogu talagalay gaariga ugu horreeya ee korontada ku shaqeeya. Waxaa ku shaqeynayay batari aan dib loo soo celin karin waxayna gaareen 6 km / saacaddii.
Markuu arkay in waxtarka gaariga uusan aheyn wax weyn (socodka waad dhaqso badan kartaa) mashruucii waa laga tegey. Ilaa tiknoolijiyada ugu horumarsan ee gawaarida korontada la helo maanta. Waxaa jira baytariyada ion lithium ion oo awood u leh inay bixiyaan ismaamul aad u tiro badan. Baabuurtu waxay gaari karaan xawaare sare.
Waad ku mahadsantahay baytariyada dib loo soo celin karo, gawaarida korontada ku shaqeeya waa la soo saaray oo waxay noqonayaan kuwo dhaqaale iyo faa'iido badan leh.
Astaamaha Gawaarida Korantada
Astaamaha ugu muhiimsan ee gaadiidkani waa awooddiisa ku shaqeynta korontada. Tani waxay ka dhigan tahay inay tahay inaan sameyno la'aanteed shidaalka sida shidaalka iyo naaftada iyo, marka lagu daro, yaan la nijaasayn jawiga. Wasakheynta deegaanka waa dhibaato culus oo caalami ah oo kicineysa isbeddelka cimilada. Intaas waxaa sii dheer, waxay mas'uul ka tahay malaayiin dhimasho dhicis ah sanadkiiba oo ka yimaada cudurrada neef mareenka iyo wadnaha.
Maanta waxaad ka heli kartaa noocyada kala duwan ee matoorrada korantada ee dhammaan bandhigyada iyo cabbirka. Waxaa jira qaar ku kordha miisaankooda yar oo ka fudud.
Aad ayey caadi u tahay in laga fikiro in haddii ay sidaas wanaagsan yihiin maxaa baabuurta oo dhami u koranto la'yihiin. Hagaag, marka hore, waxaa saameeya madaxbanaanidooda yar marka loo eego baatroolka ama naaftada. Iyagu ma aha kuwa in raqiis ah midkoodna, tan iyo markii tiknoolajiyadda weli soo koraya iyo tartan badan ma jiro. Sidoo kale ma jiraan dib-u-buuxin ku filan dhammaan meelaha oo baytariyada waxay u baahan yihiin dhowr saacadood si ay si buuxda ugu shaqeeyaan.
In kasta oo wax kasta oo la soo sheegay, gawaarida korontada ku shaqeeya waxay si tartiib tartiib ah ugu soo dhowaanayaan kuwa caadiga ah.
Qaybaha baabuurka korontada ku shaqeeya
Haddii aan bilowno inaan isbarbardhigno qaybaha gudaha ee gaariga korontada iyo midka caadiga ah, iyagu sidaa uma kala duwana. Hawlgalkeedu waa isku mid. Kuwani waa waxyaabaha ugu muhiimsan ee sameeya gaari koronto:
Mashiinka korantada. Waxay mas'uul ka tahay in tamarta korantada ee ku keydsan baytariyada loo beddelo tamar firfircoon. Tan, gaariga wuu dhaqaaqi karaa. Matoorradu sidoo kale way sameyn karaan ka soo horjeedka, taasi waa, meelaha dhaadheer ee dhaadheer waxay ka faa’iideystaan ​​tamarta firfircoonida laga helo waxayna ku keydsadaan qaab koronto.
Durbaan. Waa waxa keydiya tamarta korantada ee loo isticmaalo in matoorku shaqeeyo. Waxaa jira gawaari qaar oo leh baytari caawiya si looga fogaado inay dhulka ku xayiraan.
Dekedda Loading. Muxuu ahaa meel ay gaariga ku xiran yihiin il koronto oo dib u soo celisa batteriga.
Transformers. Iyaga ayaa mas'uul ka ah inay u beddelaan xuduudaha korantada waxa lagama maarmaanka u ah inay bateriga dib u buuxiyaan. Waxa jira gaadiid la shaqeeya talantaalliga ah iyo kuwa kale oo toos u shaqeeya. Waxay sidoo kale u adeegaan qaboojinta gaariga, iyagoo ka fogaanaya daadin iyo qaraxyo.
Maamulayaasha Waxay jaangooyaan tamarta laga helo batteriga. Sidan ayaad u dheelitiri kartaa dib u soo celinta habka ku habboon ee lagu dheereynayo nolosha waxtarka leh oo aanad uga sii darin.
Gawaarida iswada ayaa leh xoogaa faa'iidooyin ah noocyada kale ee gawaarida. Waxay kala yihiin sidan soo socota:
Maaddaama ay ka aamusan yihiin, yaree wasakhda buuqa magaalooyinka. Haddii dhammaan gawaarida wareegaya ee ku yaal bartamaha magaalooyinku ay yihiin koronto, ma jiri lahayn heer sawaxan ah. Xaqiiqdii taksi koronto ayaa maanta agtaada maray oo xitaa kamaadan maqal. Sawaxanka sidoo kale wuxuu saameeyaa caafimaadka dadka. Sidaa darteed, waa muhiim in la yareeyo.
Ma wasakhoobaan, taas oo hagaajinaysa tayada hawada magaalooyinka. Inta ay isticmaalayaan ma sii daayaan gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ee wasakheeya hawada magaalooyinka isla markaana kordhiya saamaynta isbeddelka cimilada iyo kulaylka adduunka. Kumanaan dad ah ayaa sanad walba u dhinta cudurada neef mareenka ee ka dhasha wasaqowga hawada.
Awoodda soo saarista eber. Si loo soo saaro tamar koronto, haddii aan isticmaalno shidaalka foosha, ma sii deyneyno gaasaska la adeegsanayo, laakiin waxaan soo saaraynaa wax soo saar. Sidaa darteed, gawaarida korontada waxay awood u leeyihiin inay noqdaan eber qiiqa. Tani waxay dhacdaa haddii tamarta la cusboonaysiin karo sida qorraxda iyo dabaysha loo isticmaalo in lagu soo saaro koronto.
Mishiinku waa sida uu u awood badan yahay oo ka raqiisan yahay. Badanaa waxay leeyihiin ku dhowaad awood isku mid ah tan caadiga ah waana kuwo is haysta oo la isku halleyn karo. Dhibaatadu waxay ku jirtaa ismaamulka batteriga. Matoorku malaha cunsurro sababa inuu shaqeyn waayo.
Waxtarka badan iyo isticmaalka yar. Waxtarka gawaarida korontada ku shaqeeya ayaa gaaraya 90% marka loo barbar dhigo 30% kuwa caadiga ah. Wax yar ayey cunaan anagana wax badan ayaan keydinaa. Waxay u baahan yihiin tamar ka yar isla dadaalkii, kaliya baytariyada ayaa bixiya tamartaas muddo gaaban.
Waqtigan xaadirka ah, in kasta oo ay wax badan isbeddelayaan, haddana weli waxay leeyihiin khasaarooyin badan. Kuwani waa qaar ka mid ah:
Ismaamul yar. Sida dhowr jeer lagu xusay boostada oo dhan, ismaamulka hoose ee gawaaridan ayaa gaabiyo horumarkiisa. Ma jirto waddo aad ku qaadan karto safarro dhaadheer adigoon saacado dib u buuxinayn batteriga. Tusaale ahaan, safarka ka imanaya Seville ilaa Madrid, waa inaad joojisaa ilaa shan jeer si aad dib ugu buuxiso. Dib u soo celin kasta waa dhowr saacadood oo sugitaan ah. Sidaa darteed, safar gaaban wuxuu noqon lahaa mid aad u dheer.
Ma ahan dhibco lacag ku filan. Weli ma jiraan goobo lagu dalaco oo ku filan meelo gebi ahaanba ka madax bannaan.
Awood hoose. Awoodda gaariga waa mid aad u kooban. Waxaa la baranayaa sida loo kordhiyo, maadaama ay waxyeelo ku tahay gaariga. Wadayaashu ma gaari karaan xawaare ama ku dhowaadaan gawaarida caadiga ah.
Qiimaha baytariyada ayaa ah mid aad u sareeya oo iyagu ma sii socdaan wax ka badan 7 sano.
Macluumaadkan oo dhan waxaad ku baran kartaa wax badan oo ku saabsan gawaarida korantada oo waxaad u diyaar garoobi kartaa mustaqbalka ina sugaya.
Wadada buuxda ee maqaalka: Cusbooneysiinta Cagaaran » Teknolojiyada cusub » Gawaarida korontada » Gawaarida korontada: wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Laakiin waa maxay ??? AWOOD HOOSAN? aaway macluumaadkan? Xaqiiqdii, ma aha oo kaliya in mashiinka mashiinku aad uga sareeyo (kaas oo leh xawaare deg deg ah oo ka wanaagsan) laakiin awoodda ayaa noqon karta mid aad u sareysa (waxay kuxirantahay wax badan, sida matoorada gubashada, qiimaha gaariga ... oo gaaraya 1.000 xoogaa cv)
Ogaanshaha Wasaaradda Deegaanka iyo Qorshaynta Meelaha